Fantaro ny Tantaran’ny Fahombiazan’i Dilshod Nazarov sy Ireo Tajikistan Efatra Hafa Tamin’ny Fanatanjahantena · Global Voices teny Malagasy
Fantaro ny Tantaran'ny Fahombiazan'i Dilshod Nazarov sy Ireo Tajikistan Efatra Hafa Tamin'ny Fanatanjahantena
Voadika ny 04 Septambra 2016 8:23 GMT
Dilshod Nazarov, mpitoraka maritoa tamin'ny lalao Olaimpika 2016. Sary nivezivezy teo amin'ireo Tajiks tao amin'ny Facebook.
Raha miomana amin'ny fitsenana ilay atleta nahazo medaily volamena tamin'ny Lalao Olaimpika Rio 2016, Dilshod Nazarov i Tajikistan, mampahatsiahy ny tantarany ny Global Voices sy ireo zava-bita ara-panatanjahatena tao amin'ny firenena kely, be tendrombohitra, Aziatika Afovoany nandritra ny 25 taona nahazoany fahaleovan-tena izay.
2016 – Dilshod Nazarov, mpilalao Olaimpika nahazo medaly volamena voalohany ho an'ny fireneny
Raha mamaky ny Global Voices [teny malagasy] ianao, dia mety efa nahare mikasika azy ity.
Zanaka lahin'ny ady an-trano izay namely an'i Tajikistan nanomboka tamin'ny 1992 ka hatramin'ny 1997 i Dilshod Nazarov, mpitoraka maritoa – namoy ny ainy tamin'ny ady tamin'ny 1996 ny rainy fony izy 15 taona – ary nanamarika ny dia lava sy sarotra nitondra ny firenena teo amin'ny filaminana hatramin'ny niafaran'ny ady ny fandreseny tsy mampino tamin'ny Lalao Olaimpika tao Rio.
Ny filoha lefitry ny Komitin'ny Tanora, Ny Fanatanjahantena sy ny Fizahan-tany ao Tajikistan no mpitondra ny sainam-pirenena tamin'ny fanokafana ny Lalao Olaimpika sy nantenainy indrindra hahazo medaily ho an'ny firenena. Vitsy ireo olona nihevitra fa handresy ireo mpifanandrina aminy izy handrombahana volamena.
Tamin'ny fihetsika tsy dia fahita firy, natomboky ny filoham-pirenena menavazana Emomali Rakhmon tamin'ny antso an-tariby ho an'i Dilshod ny marainany mba hiarahabana azy, raha nanantona sora-baventy lehibe misy ny sarin'i Dilshod mitsiky miaraka amin'ny sainam-pirenena manodidina ny tendany kosa ny manampahefana monisipaly tao an-tanàna maromaro.
Na ireo mpanohitra an-tsesitany aza nampiato ny tsikera lavan'izy ireo amin'ny governemanta mba hanome voninahitra ny zava-bitan'i Nazarov, feno ireo mpankasitraka azy ny tranony.
Mihahita hatraiza hatraiza ao amin'ny ampahan'ny tambajotra sosialy Tajik ny tabataba, izay mihamafy orina ao ny fankatoavana an'i Nazarov ho Maherifon'ny Firenena ao Tajikistan.
2015 – FC Istiqlol tafakatra tamin'ny famaranana Fiadiana ny Amboaran'ny Konfederasiona Aziatikan'ny Football (AFC)
FC “Istiqlol” taorian'ny iray tamin'ireo fandresena tamin'ny Amboara AFC 2015. Avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny FC “Istiqlol” ny sary.
Eny, tsy Ligin'ny Tompondaka Eoropeana io, ary raha ny marina, tsy Ligin'ny Tompondaka Aziatika akory aza, saingy afaka manao tsara kokoa amin'ny fifaninanana hany azonao hidirana ianao, sa tsy izany?
Tsy nino avokoa ny rehetra raha nantsoina nanatevina ny vondrona iray efa ahitana ekipa roa amin'ny Amboara AFC ny Istiqlol tompon-dakam-pirenena hatrany tamin'ny baolina kitra tao Tadjikistan, noho ny fahatongavany hatrany amin'ny lalao famaranana tamin'ny herintaona.
Resy an-tanindrazana ny Istiqlol tamin'ny lalao voalohany, saingy nilatsaka avy eo ny fahagagana noho ireo andiana fandresena tsy nampoizina raha nandresy ireo mpifanandrina henjana indrindra izy izay nahafahan'ny ekipa mendrika indrindra ao amin'ny firenena hisongadina ho loha-loharana tamin'ny lazaina ho “vondron'ny fahafatesana.”
Nitombo ny fanantenana satria nandroso nanavatsava ny dingana fifanintsanana tamin'ny fifaninanana ny ekipa – fifaninanana matihanina faharoa lehibe indrindra eo amin'ny klioban'ny baolina kitra Aziatika – ary tafakatra dingana famaranana tamin'ny lalao tao an-tanindrazana.
Indrisy, nofoanan'ny mpitsara ny baolina telo tafiditry ny Istiqlol nandritra ny lalao, ka nahatonga ny ekipa Malayziana Johor Darul Ta’zim nibata ny amboara nody.
Na dia teo aza izany tsy rariny miharihary tamin'ny lalao izany, nankasitraka ny mpilalao baolina kitrany ny firenena tamin'ny fihetseham-po tsara natolotr'izy ireo isaky ny fandresena manoloana ireo ekipa matanjaka sy malaza.
2012 – Mavzuna Chorieva, vehivavy nahazo medaily voalohany tamin'ny Olaimpika
Mavzuna Chorieva manao fitafim-pirenena nandritra ny lanonana fanomezana loka. Nalaina tao amin'ny girlboxing.org ny sary
Feno fihetseham-po i Tadjikistan raha nahazo medaily alimo tamin'ny Lalao Olaimpika 2012 tao Londra ilay tovovavy kely nitondra ny vatana mangatsiaka ny rainy maty tany Moskoa ho any an-tanindrazany tamin'ny fahatanorany.
Tsy ny medaily azon'i Mavzuna Chorieva tamin'ny ady totohondry sokajy lanja maivana ihany no medaily voalohany azon'i Tadjikistan tamin'ny Lalao Olaimpika, fa ity ihany koa no voalohany azon'ny vehivavy solontenan'ny firenena miteny Persiana (Iran, Afghanistan na Tadjikistan).
Toa fanambaràna tsy ampy hery ny filazana taonan'ny fahombiazana 2012 tsy mampino ho an'ity tovovavy 20 taona avy amin'ny fianakaviana sahirana ao anatin'ny mpifindra-monina ara-toekarena ity.
Ankoatra ny Lalao Olaimpika, nahazo medaily tamin'ny Fifaninanna Aziatiaka sy Iraisam-pirenena ihany koa i Chorieva. Nahazo dera tao amin'ny fireneny izy ary nahazo efitra fonenana maromaro avy amin'ny fanjakana mahantra ho fankasitrahana ny zava-bitany.
Tamin'izany taona izany ihany, araka ny efa notaterin'ny Global Voices [teny malagasy], nanambady i Chorieva ary najanony ny ady totohondry hiterahany ny zanany voalohany.
“Tiako ny fanatanjahatena”, hoy izy tamin'ireo mpanao gazety tamin'izany fotoana izany. ”Saingy zava-dehibe amiko ny fianakaviako”.
Niverina nanao ady totohondry i Chorieva saingy tsy namerina ny fahombiazany mahavalalalina tamin'ny taonany tsara indrindra teo amin'ny fanatanjahatena intsony. Mpikambana ao amin'ny vaomieran'ny tanàna ao amin'ny renivohi-pirenena Douchanbé izy ary filohan'ny Fikambanan'ny Olaimpianina Tadjikistan.
2006 sy 2007 – Mijoro ny tanora mpilalao baolina kitra ao Tajikistan
Mba hahatakarana ny antony mahatonga ny zatovo mpilalao baolina kitra ao Tadjikistan ho reharehan'ny firenena nandritra ny roa taona mifanesy, tsara ny manamarika fa mbola tsy tafiditra tamin'ny fifaninanana lehibe ny ekipam-pirenena zokiny ary laharana faha-144 manerantany amin'izao fotoana izao.
Ny voka-dratsin'ny ady an-trano no tsy nahafahan'ireo mpilalao baolina kitra mba hanao fanazaran-tena ary mbola vao niforona ny ligim-pirenena ahitana ekipa maromaro raha nahazo medaily alimo tampotampoka ny ekipa latsaky ny 16 taona nandritra ny fandraisany anjara voalohany tamin'ny fifaninanana kaontinantaly Aziatika.
Ity fahombiazana ity no nitarika ny fandraisana anjara ifaninanan'ny ekipa 24 tamin'ny Amboara Manerantany ho an'ny latsaky ny 17 taona, izay nahatafakatra azy tamin'ny fifanintsanana tamin'ny nahazoany fandresena tamin'ny isa 4 noho 3 tao anatin'ny vondrona izay nilalaovan'ilay kintan'ny Ligy Voalohany Anglisy Eden Hazard amin'izao fotoana izao, ary tsy nahatafakatra ny ekipa Belza nilalaovany.
Indrisy, nifarana tamin'ny faharesena tamin'ny tifitifitra baolina (penalty) nifanandrinana tamin'ny Però ny lalana mankany amin'ny voninahitra iraisam-pirenena. Saingy efa tafiditra ny aretim-pitiavana baolina kitra.
Nandefa mivantana ny lalao tao amin'ny tranonkala ao an-toerana izany nampitombo avo enina heny ny mpijeriny ny mpanoratra ity lahatsoratra ity rehefa nahahoatra ny haavo mbola tsy azon'ny ekipa hafa hatramin'izay nisiany ny ekipan'i Tadjikistan.
1991-2016. Miondreha eo anoloan'ny ekipa ITF Taekwon-Do ao Tajikistan
Amin'ny famakiana ireo fandresena “saika tampotampoka” avokoa sy ireo ezaka feno herim-po, mety mahita tokoa ianao fa i Dilshod Nazarov no mpanao fanatanjahantena hany nandresy tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena raha misolontena ny firenena Aziatika Afovoany.
Mety ho diso tokoa izany.
Raha taranja olaimpika ny ITF Taekwon-Do, mety nila tranombakoka salantsalany i Tadjikistan mba hanangonana ireo medaily azony nandritra ny taona maro hatramin'ny nahazoana ny fahaleovantena.
Ankehitriny, afaka mirehareha ny firenena fa manana tompon-daka manerantany tsy latsaky ny 20 amin'ny taekwondo ary laharana faharoa manerantany amin'izany taranja izany, aorian'i Korea Avaratra.
Teo amin'ny folo taona lasa izay, niantsafa tamin'ny ray mpiahy ny fanatanjahatena ao Tadjikistan, Mirsaid Yahoev ny mpanoratra ity lahatsoratra ity, nahavita nilaza mihitsy izy (ray mpiahy) tamin'izany fa « tsy nieritreritra » ny medaily volafotsy sy alimo ho toy ny fahombiazana amin'ny fifaninanana ITF manerantany ny ekipany.
Toa faly sokajiana ho outsider mahery fo amin'ny fanatanjahantena hafa, mirehareha ny Tadjiks farafaharatsiny mahita ny mpifaninan'izy ireo atahorana na aiza na aiza, manomboka ao Panama City ka hatrao Pyongyang.
* ITF: Federasiona Iraisam-pirenena Taekwon-Do
** Ny Federasiona Iraisam-pirenena Taekwon-Do (ITF) sy ny Federasiona Manerantany Taekwon-Do (WTF) dia somary samihafa saingy dika mitovy amin'ny fanatanjahantena, ity farany ity no nisolo-tena tamin'ny Olaimpika. Raha te-hahafantatra ny maha samihafa azy vakio ity lahatsoratra ity.